Kala Bixi | Martech Zone
Friday, May 18, 2007 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Kawaran hadaan taariikh wadaagno dadka sida aan ugu suuq geyno oo kale? Waxay u dhici kartaa wax sidan oo kale ah…
Koofiyad Koofiyad Kuxiran barta 'Viral Garden' blog.
Tags: hay'addaganacsimacaamil raadintabartilmaameedka macaamiishashukaansibartilmaameedka dadkademographicsvideo qosol badankaftanbartilmaameedkakala tag
Maxay suuqyadu ugu ordi la'yihiin Jaiku?
Waxaan kugu dari doonaa liistadayda raadintan. Shubay fiican
Phantastic, olole hal abuur leh. Laga soo bilaabo MICROSOFT!
Iyo mid aad u xiiso badan in la arko qaab cusub - internetka oo keliya, taas oo macnaheedu yahay inaad u sheegi karto sheekooyin dhaadheer adigoon ganaax kujirin.
Microsoft hadda unbay noqotay shar ka yar ad